Esi esi mee Bee Portuguese Beef | Otu Di na Nwunye
Portuguese Beef Stew, dị ka ezigbo stew, bụ ihe niile banyere ihendori. Iji mee ka ọ dị mma, ịchọrọ ihe niile dị mkpa nke abụba, nnu, ose, na nke ọma (na ihe kachasị mkpa) - oge.
Na Portuguese Beef Stew, enwereghị ọpụpụ ọ bụla dị egwu site n'ụdị stew ị nwere na America ma ọ bụ Northern Europe, nke ọzọ karịa mgbakwunye nke obere Wine White Wine na - ezigbo onye na-eme ihe - chorizo.
Na efere a anaghị eme mgbagwoju anya. Na-agbaso usoro ndị a, ọ bụ usoro nhazi na-aga n'ihu ma na-enye ohere maka ohere maka imepụta ihe. Ọ bụrụ na ị na-achọ obere ihe na-esi ísì ụtọ ị nwere ike inweta chorizo ​​spicier, ma ọ bụ tinye cayenne. Anyị emeela nke a na mmanya na-acha uhie uhie, kama nke na-acha ọcha, na ihe ọ bụla dị mma. Ọ bụ efere dị iche iche, ma yiri ya n'obi.
Mee ka anyị mata otú efere a si arụ ọrụ maka gị, mgbanwe ị na-eme, na otu ị si emezie ka ị gbakwunye onwe gị!
Usoro isi nri maka nsị snoo azu a dị mfe ma dị iche iche, na-eji naanị mmanya ọcha mee broth.
2 pound anụ na-enweghị anụ ọkpụkpụ na-enweghị ọkpụkpụ ebipụ ya na 2½ "iberibe (nnukwu chunks)
4 - 6 dum garlic cloves ekpochapu ma gbarie ya n'azụ onye onye na-eri nri
6 - 8 allspice tomato ọzọ ma ọ bụrụ na ha dị obere karịa peppercorns
2 n'ọnụ mmiri
1 teaspoon dum peppercorns
1 nnukwu odo yabasị egbutu na ọkara site na mgbọrọgwụ ka mgbọrọgwụ, mgbe ahụ thinly sliced
3 iko Vinho Verde Portuguese ma ọ bụ ụdị mmanya ọcha ọ bụla
¼ teaspoon pawuda ala
4 - 6 ounces a na-akpọ Spanish chorizo ​​soseji nnọọ thinly sliced ​​(ọ dịghị ihe karịrị ¼ ")
Nnu nnu na ala nụrụ ụtọ
Ngwurugwu na-eburu ọkụ na 325 Celsius F.
Jiri cheesecloth na eriri, mee ùkwù bouquet-garni na garlic, allspice, akwukwo akwukwo na peppercorns n'ime.
Tinye eyịm sliced ​​na oven oven. Nestle na bouquet garni na etiti eyịm, na oge ya na nnu na ose.
Wunye na mmanya (i nwere ike dochie mmanya na akwukwo nri ma ọ bụ ọbụna mmiri, ma gbakwunye teaspoon nke mmanya dị ọcha na-acha ọcha iji dochie mmanya nke acid), ma tinye nsị anụ ahụ n'ime eyịm n'akụkụ ọnụ nke ite.
Oge nnu na nnu na ose ma fesa pawuda n'elu. Kpuchie ite ma tinye ya na oven maka awa 3½. Lelee ọkwa nke broth ọ bụla oge 30, na-agbakwunye mmanya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Mgbe 3½ nke nri, tụfuo bouquet garni, gbakwunye na chorizo ​​slices, na-atụgharị anụ na-ekpuchi ha ka ị na-akpali ha n'ime ite.
Kpuchie ite ahụ ma mee ka ọ dabe na countertop maka 20 nkeji. A na-emezi stew!
Na-etinye ehi na agwakọta n'ime nnukwu ọkwá, tinye ụfọdụ n'ime ihe oriri ahụ n'ime nnukwu efere ọ bụla na nsị.
Na-arụ ọrụ na salad green.
Category: Brazil, Nri na ihe ọṅụṅụ, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka, South America Tags: nsị beef, na Portuguese, Ezi ntụziaka
← Chorizo ​​Stuffed Poblano Nri Ntụziaka
Ndị agbata obi Boston na 3 Ị Pụghị Ịla →